Qulqulluu Sinoodosiin Ortodoksii Tawaahidoo hundeeffama Mana Lubummaa Oromiyaa kuffise - BBC News Afaan Oromoo
Qulqulluu Sinoodosiin Ortodoksii Tawaahidoo hundeeffama Mana Lubummaa Oromiyaa kuffise
31 Onkololeessa 2019
Madda suuraa, Hailemichael Tadesse
Sinodoosiin Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gaaffii mana lubummaa Oromiyaa hundeessuu kuffisuu isaa Barsiisaa H/Mikaa'el Taaddasaa BBC'tti himan.
"Gaaffiin mana lubummaa hundeessuu kuni mana amantaa kana kan diigudha gareen jedhuu fi lakkii manni lubummaa kuni hundaa'uun faayidaa qaba kanneen jedhan gidduutti sinodoosii irratti mormii guddaatu ture.
Waliigalatti garuu Sinodoosiin gaaffii keenya kufaa taasiseera" jedhan Barsiisaa H/Mikaa'el.
"Ummanni keenya hanga Afaan isaatiin tajaajila argachuu jalqabutti wanta mana amantaatiif kennu hunda dhaabee sinoodoosii irratti dhiibbaa uumuu qaba," jechuun himan.
Sinodoosiin Kibxata darbe murtee kana erga dabarseen booda, guyyaa Roobii qaboo yaa'ii mallatteessuuf Sinodoosiin yeroo walitti deebi'us mormii guddaan waan mudateef ammas qoratamee haa dhihaatu kan jedhu yaanni kennamuus himan.
Mana Lubummaa hundaa'uf yaadame
Yaanni 'Qoratamee haa dhihaatu' jedhamu kuni garuu toftaa manni amantichaa ittiin gaafficha irraanfachiisudha jedhu."Haqni ture haqa sijalaa sarbamedha. Kana duras qoratamee haa dhihaatu jedhameet ajandichuu irraanfatamee ture.
Ammas Qoratamee haa dhihaatuun kuni aara galfii argatanii dhimmichi akka dagatamuufi ajandaawwan biroo yeroosuma dhageeffatamee deebii yoo argatu keenya beekaa lafarra butu" jedhan.
Miseensa koree mana lubummaa Oromiyaa keessaa yaa'ii sinodoosii kanaratti akka hirmaannuufis carraa hin arganne jedhu barsiisaa H/Mikaa'el.
"Nun waamanii yaada keenya dhageeffachuudhaaf guutummaan guututti fedhii hin qaban.
Nuti yeroo isin nubarbaaddanitti argamnee yaada keenya ibsuudhaaf qophiidha jennee itti himaa turre.
Garuu abbootiin nuwaamanii sirnaan nun mariisisne," jedhan.
Qulqulluun Sinoodosii koree Mana Lubummaa Oromiyaa seeraan gaafachuufi
Tarkaanfii itti aanuuf miseensota keenya waliin mari'annee kan murteesinu ta'us haala nagaa Oromiyaa fi biyyi keessa jirtu hubannoo keessa galchinee ifa taasifna jedhan.
Hiriira dhihoo kana bahame akka waldhabdeetti akka jijjiiramu kan ta'es gaaffii keenya gatii dhabsiisuufi itti yaadamee kan ta'edhas jedhan.
"Gaafffiin mana lubummaa Oromiyaa rakkoo nutti uumeera, manneen amantaa keenya miidhamaa jiru dhiibbaa biraa ofduubaa qaba, ittiin jechuudhaaf dhiibbaa guddaa uumaa turan.
Kanaaf yeroo muraasa kenninee mari'annee waan itti aansinee goonu kan beeksifnu taha," jedhan.
'Dargaggoonni... arrabsanii, fiiganii bataskaanatti galaa turan'
Jeequmsi tibbanaa guuza warra mana amantaa fayyadamanii kaayyoo siyaasaa galmaan gahuu barbaadaniin qophaa'e ture jedhu barsiisaan kun.
"Bishooftuutti dargaggoonni warra hiriira deeggarsa Jawaar bahan arrabsuudhaan, muummicha ministeeraa arrabsuudhaan gaafa qeerroon itti dhufu fiiganii mana amantaa Mikaa'elaa fi Rufaa'elitti galaa turan.
Gaafa qeerroon mana kiristaanaatti deemummoo 'qeerroon manna kiristaanaa gube' jedhanii lallabu. Kuni ajandaa itti yaadamee kalaqamedha," jedhan.
Yaanni mana Lubummaa Oromiyaa hundeessuu kuni hanga fiixa bahutti ejjennoo fi deeggarsi ummata keenyaa murteessaa fi sinodoosii irrattillee dhiibbaa kan uumudha jedhan.
"Ummanni hanga afaan isaatiin tajaajilamutti wanta mana kiristaanaatiif kennu hunda dhaabuu qaba. Hanga afaan isaatiin tajaajilamutti ijaarsa mana kiristaanaa adeemsifamaniif gumaacha tokkoyyuu gochuu hin qabu.
Waaqeeffachuu, kadhachuun fi jireenyi hafuuraa akkuma eegametti ta'ee jechuudha," jedhan Barsiisaa H/Mikaa'el.
Ummanni tarkaanfii akkanaa fudhatee sinodoosii irratti dhiibbaa yoo uume sababni sinodoosiin walgahii waamee waan kana hin murteessineef hin jiraatus jedhan.
Gareen manni lubummaa kuni akka hin milkoofne barbaadan bajata hanga birrii miiliyoona 3.4 ramadanii gaaffii kana ukkaamsuuf hojjechaa turuus himan.
Erga gaaffii mana lubummaa hundeessuu kana gaafannee asitti miseensota keenyarra dhiibbaa guddaan gahaa jiras jedhan.
"Waan ummanni keenya afaan Oromootiin haa tajaajilamu jenneef mana keenyatti dachee itti dhalannetti keessummaa taane, namoonni kaanimmoo waan numormaniif qofa warra abbaa qe'ee ta'anii waaqefachaa jiru,'' jedhan.
Kanaan alattis bataskaanarratti waaqeffachaa hin jirru, caasaan mana amantaa nuuf ajajamaa hin jiru, miidiyaan mana kiristaanaa sagalee keenya dhaggeeffachaa hin jiru, ummanni akka nuun hubanne sirritti nurratti hojjetamaa jira jechuun BBCtti himan.
Amantaa: Waldaa Ortodoksii Itoophiyaa fi Afaan Oromoo
24 Hagayya 2018
Qulqulluun Sinoodosii Ortodoksii Tawaahidoo koree Waajjira Lubummaa Oromiyaa balaaleeffate
7 Fuulbaana 2019
Luba Balaay Mokonnin: 'Ummanni Oromoo dhiifama gaafatamuu qaba'
22 Hagayya 2019
Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa: 'Ibsi Lubni Balaay kennuuf jedhan beekkamtii hin qabu'
30 Hagayya 2019
'Rakkoon Itoophiyaa mudatee jiru tattaffii hunda hirmaachiseen furama'
Walitti bu’iinsi Israa’eel fi Paalestaayin gara Weesti Baankitti bal’ate
Sirni ittisa haleellaa qilleensaa Israa'el 'Iron Dome' jedhamu maali?
Hokkorri Israa'el-Gaazaa akka dhaabbatuuf biyyoonni addunyaa gaafatan
Hokkora keessoo Israa'eel waraanaa waliiniif sodaatamee fi Waraana Gaazaa hammaate
Dubartiin lotorii $ mil 26 mo'atte tikkeettiisaa uffata wajjin miichuu himte
WhatsApp qajeelfama itti fayyadamaa haaraa borirraa eegalee hojiirra oolcha
'Ajjeechaan seeraan alaa qaama mootummaan fudhatamaa jiru hatattamaan dhaabbachuu qaba' KFO